Fortnite rụkọtara ọzọ na Marvel na ndị ọbọ: Endgame | Gam akporosis
Na Eprel 25, ndị ọbọ: Endgame ga-ahapụ ya, akụkụ nke abụọ nke ndị na-abọ ọbọ Infinity Wars nke bidoro otu afọ gara aga. N'afọ gara aga, iji kwalite ihe nkiri ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ezie na ọ chọrọ ya, Fortnite mere ihe omume pụrụ iche n'aka Thanos, pun bu n'obi.
Abọchị ole na ole, ndị ọrụ ha nwere ike iji nke Thanos gauntlet n'oge egwuregwu iji merie ndị iro niile ị ga - ezute n'oge egwuregwu. Ọ bụrụ n’inweghị ohere ịnụ ụtọ oge ahụ, ị ​​nwere ike ịmeghachi ya ọzọ n’ụbọchị ole na ole sochirinụ, dịka Fortnite ka kwupụtara ọhụụ ọhụrụ ya na Marvel.
Ihe ọ bụla dị mkpa
- Fortnite (@ogechi_nkechi) April 22, 2019
Site na tweet na ederede Ihe ọ bụla dị mkpa, Fortnite gosiputara anyi agwa nwanyi soro ọta Captain America. Nkeji ole na ole gara aga, akaụntụ gọọmentị Fortnite na Spanish na Bekee, ha bipụtara onyonyo ọzọ nke anyị na-ahụ ọhụụ ọhụụ, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke anyị nwere ike mezuo site na ịme ọrụ.
- Fortnite (@ogechi_nkechi) April 23, 2019
M na-ekwu na m na-arụ ọrụ ọzọ, n'ihi na n'ọnwa ole na ole gara aga, Epic Games, na-ezubere ihe omume niile na ndị ọrụ niile, ọ bụghị nye ndị na-azụta naanị agha ahụ, kamakwa ndị niile na-abanyebeghị n'ike n'ike nke bụ egwuregwu kachasị aga nke ọma n'ime afọ abụọ gara aga. Karịsịa, enwere m obi abụọ na ọ bụla n'ime ihe ndị a dị na ụlọ ahịa, mana ihe ọ bụla doro anya na ọ ga-ekwe omume.
Ọ ga-abụ Eprel 25 ọzọ mgbe a na-emelite egwuregwu ahụ ọzọ iji gbakwunye, ọ bụghị naanị mgbanwe ndị na-eme na maapụ na ụbọchị ndị a, kamakwa ịgbakwunye ihe omume ọhụrụ nke ga-eme n'aka Marvel na Epic Games, ihe omume anyị ga-enwe ị gwara ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Fortnite rụkọtara ọzọ na Marvel na ndị ọbọ: Endgame